Saddex Arrin Oo Soo Dedejisay Safarka Kheyrre Ee Puntland – Gorfeeyaha Wararka Goor Walbo iyo Goob Kasto
By gorfeeye	 Last updated Jul 31, 2018
R/W Soomaaliya mudane Xassan Cali Kheyrre ayaa safar maalintiisii labaad ah ku maraya qeybo badan oo kamid ah gobollada maamulka Puntland ee Soomaaliya.
Haddaba shabakadda wararka ee Shaaciye waxa ay idin soo gudbineysaa saddex arrin oo keentay in safarka uu xilligan kusoo aado.
Ku Nafisid siyaasadeed:- waxa aan la soconnaa in dhowaanba ay heysteen cadaadis siyaasadeed oo qanjaha istaagay, kaas oo isaga iyo madaxweynaha kala dhexeeyay, si middaas la iskaga yareeyo oo saameyntiisa uu usoo ceshto ayuu ra’iisul wasaaraha u aaday deegaannada Puntland.
Galaangal ka sameysasho:- gobollada keliya ee la hubo in ay ka dhici karaan doorasho qof iyo cod ah gebi ahaan dalka Soomaaliya waa kuwa Puntland, sidaas oo ay tahayna waxaa daggan dad tiro ahaan aad u badan, cid kasta oo dooneysa in ay ugu yaraan saameyn ku yeelato siyaasadda waxa ay u baahan tahay in aad dadkaas qiimeyso miisaanka aad ku leedahay, si taas lamid ah Kheyrre qiimeyntaas ayuu wadaa oo qeyb ka ah safarkiisa.
Jebinta rikoorkii Madaxweyne Farmaajo:- Siddeed bilood ka hor Madaxweyne Farmaajo ayaa safar dhulka u badan ku maray magaalooyinka Puntland, si middaas uu uga gun gaaro waa sabab kale oo uu Kheyrre u soo dedejiyay safarkiisa F.G:- Waa ay jiri karaan oo ayba jiraan sababo kale oo keenay safarka R/W Kheyrre.